बिशाल तिमल्सिनाको "सानी" गजल भिडियो सार्वजनिक( भिडियोसहित) | News Nepal
बिशाल तिमल्सिनाको “सानी” गजल भिडियो सार्वजनिक( भिडियोसहित)
काठमाडौँ । गजलमा केही फरक गर्ने प्रयास स्वरुप विशाल तिमल्सिनाले भिडियो गजल सार्वजनिक गरेका छन्। मंगलबार संवाद चौतारीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच भिडियो गजल सार्वजनिक गरिएको हो। “सानी” शिर्षक दिइएको उक्त गजलको भिडियोमा सर्जक तथा निर्माता विशाल र एलिजा आचार्यको अभिनय देख्न सकिन्छ। पवन भुजेलले निर्देशन गरेको भिडियोलाई सामुएल तामाङ्गले संगीत दिएका छन्।
भिडियो सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै सर्जक विशालले आफ्नो सानैदेखिको सपना पुरा भएको बताए। पछिल्लो समय गजलको क्रेज खस्किएको महसुस आफूले गरेकाले यसको निरन्तरताका लागि नेपालमै पहिलो पटक यो प्रयास गरेको उनको भनाई थियो। यो सानो प्रयासलाई मुर्त रुप दिन धेरै व्यक्तिहरुको साथ र सहयोग रहेकाले उनले सबैलाई धन्यवाद दिए।
त्यस्तै कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि साहित्यकार डा. रेनुका सोलुले यो नयाँ प्रयासका लागि बधाई दिदै गजलको दायरा साघुरिएको छ भन्नु गलत भएको बताइन । कार्यक्रममा सानी भिडियो टिमका अलावा हास्यकलाकार पवन खतिवडा (म्याकुरी) लगायत अन्य कलाकार तथा निर्देशकहरुको पनि सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा सहभागी सबै अतिथिले नबिन काम सुरु गरेकोमा विशाललाई बधाई तथा सफलताको शुभकामना दिए!
प्रकाशित मिति : 2021-03-02
भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्केेेट जात्रा आजबाट शुरु
भादगाउँ । सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्वको भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्का (बिस्केट) जात्रा आजबाट शुरु हुँदैछ । यो जात्रासँगै भक्तपुर ९ दिन...
सुरेश रमणको ‘बिर्सी सके हाँस्न पनि म’ सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडाैं । गायक सुरेश रमण अधिकारीको शब्द, संगित र स्वरमा 'बिर्सी सके हाँस्न पनि म' बोलको गीत सार्वजनिक गरेका छन्...
हिक्मत रावतको मार्मिक गीत ‘कर्मै हारेको’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडाैँ । गायक तथा लेखक हिक्मत रावतको नयाँ गीत ‘कर्मै हारेको ’ सार्वजनिक भएको छ । आज सार्वजनिक गरिएको ‘कर्मै...
गायिका तथा लेखक हुमागाईलाई `राष्ट्रिय समावेशी म्युजिक अवार्ड´
काठमाण्डौँ । गायिका तथा लेखक विमला हुमागाई `चौथो राष्ट्रिय समावेशी म्युजिक अवार्ड २०२१´ प्रदान गरिएको छ । गायक तथा लेखक...
कुशल बेलबासेको लोकदोहोरी गीत ‘हातैका पौजाले…’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौँ । गायक तथा गीतकार कुशल बेलबासेको लोकदोहोरी गीत 'हातैका पौजाले...' सार्वजनिक भएको छ । कुशल बेलबासे र गायिका शान्ती...
मिसेज व्यूटी क्वीन प्रतिष्पर्धामा सजिता रेग्मी
काठमाडाैं । 'लेट मि इन मिसेज व्यूटी क्वीन' सिजन ४ मा प्रतिष्पर्धीको रुपमा सजिता रेग्मी भाग लिएकी छन् । सिजन...
नारायणहिटी अगाडि महानगरको कन्सर्ट, सडक खाली गराइयो
काठमाडाैँ । दरबारमार्गस्थित नारायणहिटी संग्राहलय अगाडि बिहीबार भव्य कन्सर्टसहितको कार्यक्रम गर्न लागिएको छ । माघ २३ गते ओली समूहले नारायणहिटी...
हातमा साङ्लो बाँधेर प्रदर्शनमा उत्रिए स्रष्टाहरु
काठमाडौं । संसद विघटनको विरोधमा स्रष्टा र कलाकारहरुले शुक्रबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । सबैखाले प्रतिगमनका विरुद्ध, निरन्तर अग्रगमनको पक्षमा...
आज सोनाम ल्होसार, सरकारले दियो सार्वजनिक विदा
काठमाडाैँ । आज विविध कार्यक्रम गरी सोनाम ल्होसार मनाइँदैछ । तामाङ समुदायले माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन सोनाम ल्होसारलाई नयाँ वर्षका...